बिमितहरुको गुनासोः स्वास्थ्य बीमाको सस्तो औषधी, ‘सेवा’ नाम मात्रैको !
बीमा एजेण्टहरूले आफ्नो फाइदाका लागि स्वास्थ्य बीमामा ठगी गरेको गुनासो
निर्माण सञ्चार, जुम्ला | सामान्य आर्थिक अबस्था भएका परिवारलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पुर्याउने, ५ जना परिवारले वार्षिक २५ सय जम्मा गरे ५० हजार बराबरको स्वास्थ्य सेवा पाउने, प्रतिष्ठानमा भनेकै बेला निशुल्क स्वास्थ्य उपचार पाउने र अरु भन्दा बिमित व्यक्ति सर्वसुलभ सेवा पाउने यी सबै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका उद्देश्यहरु हुन् ।
२५ सयले ५० हजारको सेवा पाईने भ्रम त स्थानियमा फैलियो ।
तर यर्थातमा जुम्लाका नागरिकले भनेझै सेवा पाएका छन् त ? पातारासी गाउँपालिका ७ की चैती बुढाको गुनासोअनुसार ‘उनलाई बीमा गराउनु पहिले माथि भनिए झै आश्वासन दिइएको थियो ।’
अन्नत चैती बुढा विरामी भएर प्रतिष्ठानमा उचार गराउन आउँदा बीमामा तोकिएझै सेवा पाईनन् ।
सिटामोल मात्रै हातमा थमाएर कागजभरी लेखी मेडिकलबाट किन्न भनेर पठाएको उनको भनाई छ । स्वास्थ्य विमतिले पनि किन्नुपर्छ भनेर सोध्दा बीमा कम्पनीसँग सोध्नु भनेको जवाफ आयो ।
स्वास्थ्य बीमा समस्याको समाधान गर्ला भनेको त सस्तै उपचार गर्ने रहेछ बढाले बताइन् ।
उनकोजस्तै उपचार गराउन आउने अन्य विरामीको अनुभव पनि उस्तै छ ।
गाउँमा बीमा दर्ता सहयोगीहरुले भनेझै धेरै कुरामा सुविधा पाइने भने पनि आखिर स्वास्थ्य बीमाले बिमितलाई औषधि किन्न पठाउने गरेको समेत बुढाले बताइन् ।
‘बिरामी हुँदा उपचार खर्चमा सहज होला भनेर स्वास्थ्य बीमा गरेको थिए’, बुढाले भनिन् ‘तर स्वास्थ्य बीमाले सस्तो औषधि मात्र दिन्छ, महंगो औषधि मेडिकलबाट नै किन्नु पर्छ भन्यो ।’ ‘पातारासीकै सिता बोहोराले भनिन्’ ‘२५ सय रुपियाँका बीमावापत ५० हजार सम्मको उपचार पाईने व्यवस्था छ ।’
यता चन्दननाथ नगरपालिका ५ की जमुना सुनारले आफ्नो १२ जना परिवारको बीमा ६ हजार रुपियाँको स्वास्थ्य बीमा गरेकी थिईन् ।
स्वास्थ्य बीमा गरेवापत् हामी स्वास्थ्य बिमितले पाउनु पर्ने सुविधा दिनुहोस् भन्दा स्वास्थ्य बीमाको कम्पनीमा जानु भन्ने गरेको पनि बिमित सुनारले सुनाइन् ।
स्वास्थ्य बीमाले जुम्लाका सोझा जनतालाई सिँधै ठगेको आरोप छ ।
बीमा एजेण्टहरूले आफ्नो फाइदाका लागि स्वास्थ्य बीमा गरेको समेत गुनासो गरेका हुन् ।
विमित विरामीहरु उपचार गराउन आउँदा निशुल्क सेवा पाउने भन्दै मख्ख पर्दै आएकाहरु पनि पछि मंहगो औषधी किनेर फर्किने गरेको पाइएको छ ।
बिमित बिरामीहरुले उपचार गराउन आउँदा धेरै आशा गर्नु पनि उपयुक्त होईन प्रतिष्ठानका मेडिकल डाईरेक्टर मिनराज बुढाले भने ।
खाद्यन्न समयमै नपाउने कर्णालीमा औषधि कहाँ समयमा नै पुरयाउन सकिन्छ भन्ने गैर जिम्मेवार जवाफ दिएको अधिंकाश विमितको गुनासो छ ।
कतिपय औषधि बीमा कार्ड भित्र पनि नपर्न सक्छ त्यसले गर्दा मेडिकलबाट किन्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई बिमितले स्वास्थ्य सुविधा र उपचार खर्च दिएको डाक्टर बुढाले भने ।
जुम्लामा सबै बिमितहरुले यस्तै गुनासोसुनाउने गरेका छन् ।
तर, विमाभित्र नपर्ने औषधीहरु मात्रै बाहिर पठाउने गरेको बताए । स्वास्थ्य विमाका जिल्ला प्रबन्धक पे्रमकुमार भण्डारीका अनुसार अहिलेसम्म भएका जुम्लाका साढे ११ हजार नागरिक बिमित भएका छन् ।
बीमामा तोकेको बमोजिम औषधी उपचार नपाएको भन्ने विषयमा आफ्नो गम्भीर ध्यानकर्षण गएको उनको भनाइ छ । प्रतिष्ठानसंग बसेर यस विषयमा निक्र्यौल निकालीने बताइएको छ ।